Global Voices teny Malagasy » Fanambaràna Momba Ny Haren’ireo Serba Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Janoary 2017 6:53 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika (ru) i Елена Донцова, Miriam Palisson, Arimalala
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Serbia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Saribe fandrakofana ny tahirin-kevitry ny KRIK; izay manisa ny fananan'ireo Serba mpanao politika. Aseho amin'izany: Slavica Djukic-Dejanović, Milan Krkobabić, Aleksandar Vucić sy Ana Brnabić
Tamin'ny tapaky ny volana Desambra, ny KRIK, fikambananà mpanao gazety mpanadihady momba ny heloka bevava sy ny kolikoly, nanomboka namoaka mba ho fanta-bahoaka ny tahirin-kevitra izay mitanisa ny fananan'ireo Serba mpanao politika. Lohateny lehiben'ny gazety maro ary niteraka adihevitra mafana tamin'ny aterineto ny vokatry ny fanadihadiana nataon-dry zareo.
Aborak'izany tahirin-kevitra izany, antsoina hoe “Imovina političara ” [rohy amin'ny teny Serba] ( “Fananan'ny mpanao politika”) ny momba ny fananan'ireo lohandohan'ny mpisorona mpanao politika sy ny fianakaviany, ary koa ny momba ny fifandraisana ananan-dry zareo amin'ny fandraharahàna ary ny olany any amin'ny fitsaràna. Ny tanjon'ity tetikasa ity, tohanan'ny Fikambanana Open Society  ao Serbia, Tahirim-bola nasionaly ho an'ny fanohanana ny demokrasia (NED) ary ny fanomezana avy amin'ny mpamaky azy, dia ny “mba hanao izay hahatakaran'ny olom-pirenena hoe iza ireo olona mpitarika ny fireneny” . (Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: tohanan’ ny Global Voices ihany koa ny Tahirim-bola Open Society [rohy amin'ny teny Anglisy].
Amin'izao fotoana izao dia afaka mamaky ireo Serba hoe ny fianakavian'ny minisitry ny Vola Dušan Vujović  [amin'ny teny Serba] dia manana trano sy efitrano maro ao Serbia sy any Etazonia, na koa ny vinantolahin'ny Minisitry ny harena voajanahary sy ny Angovo, Aleksandar Antic  [amin'ny teny Serba] dia voaheloka noho ny famokarana “amphetamine” tao amin'ny orinasa mpanao fanafody izay fananana iombonany tamin'ny anabavin'ny minisitra.
Nisafidy ny tsy tonga dia hamoaka indray mandeha ny vokatry ny fanadihadiany ny KRIK, fa hamoaka isan'andro ny mahakasika ireo mpanao politika sasany. Ireo gazety lehibe toy ny Blic  [amin'ny teny Serba] sy Danas  [amin'ny teny Serba] dia namoaka ireo fanambarana ireo ho lohateny lehibe.
Isaky ny mombamomba ny tsirairay dia ahitana tahirin-kevitra momba ny trano, efitrano, fiara sy orinasan'ny Minisitra mbola amperin'asa, ary manazava ny fomba nahatongavan'ireo fananana ireo teo am-pelantanany. Ahitana vaovao momba ireo fananan'ny mpanao politika naorina tsy ara-dalàna sy tsy misy fahazoandalana ilay tahirin-kevitra. Ary koa ny tahirin-kevitra momba ny fampindramam-bola, fananana izay ofàina na ny olona izay nanaovan'izy ireo fifanarahana fiarahamiasa ary nanao hadisoana.
Hanavao tsy tapaka ny tahirin-keviny ny KRIK miaraka amin'ny mombamomba vaovao an'ireo mpanao politika sy manampahefana, ary hameno ireo mombamomba efa misy aminà torohay vaovao.
Ny fanazavana hita ao amin'ireny mombamomba ireny dia avy amin'ny tahirin-kevitra ofisialy izay azo isintonana dika mitovy nomerika ho amin'ny solosaina manokan'ny tena.
Ho an'ny fanombanana ny trano sy ny tany, nanakarama sampan-draharana manokana izay nikajy ny tena vidin'ireny eo anivon'ny tsena ny KRIK.
Ho fiarovana ny fiainana manokan'ireo mpanao politika, ny fianakaviany sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky, namafa ny sasany amin'ireo tahirin-kevitra afaka idirana avy amin'ny tahirin-kevitra nomerikany ireo mpanao gazety: torohay manokana, laharan'ny trano sy ny efitrano. Nefa kosa, navelan'izy ireo ho hita ny anaran'ny làlana, mba ahafahana manana hevitra momba ny vidin'ny fanànana iray, miainga avy amin'ny toerana misy azy.
Niteraka adihevitra be tamin'ny aterineto ireny fanadihadiana ireny, indrindra eo ambanin'ny tenifototra #imovinapoliticara , izay midika hoe “fananan'ireo mpanao politika”. Naneho hevitra momba ireo fanambaràna sy ny fiantraikany ireo mpanao gazety sy ny olom-pirenena.
Manana orinasa miafina any am-pitan-dranomasina ny Minisitry ny Fiarovana izay nanao sonia fifanarahana taminà orinasa iray mpikirakira telefaonina .
Nikarakara ny lanonana mahazatra tao amin'ny Tranoben'ireo Manamboninahitry ny Tafika Mitam-piadiana ao Serbia (amin'ny teny Serba) ny minisitry ny Fiarovana, fa tsy nitranga tao amin'ilay lanonana ny Talata. Mety hoe vokatry ny #imovinapoliticara [fanànan'ireo mpanao politika] ve?
Rohy: miaiky ny fanànana orinasa any am-pitan-dranomasina ny ministra Đorđević
Ny ministra Antić, ny orinasa famokarana rongony an'ny anabaviny sy ilay vinantolahiny jiolahy…
Nieritreritra tsilalaon-teny manondro ilay fikambanana mpanao heloka bevavan'ny fianakaviana Cosa Nostra  (izany hoe ny ‘mafia’), avy amin'ny teny voalohany amin'ny anaran'ny ministra Krkobabić ny mpampiasa Twitter iray.
Mitazona ireo orinasany rehetra ho “ao anatin'ny fianakaviana” ireo mpikambana ao anatin'ny fianakaviambe Krkobabić.
Ny mpampiasa hafa naminavina hoe ho an'ny gazety iray, ny fanaovana ho lohateny lehibe amin'ny gazety ny vaovao fototra momba ny KRIK dia mitovy amin'ny fanohanana ireo mpanoratra ity fanadihadiana ity. Tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, KIRK sy ny mpiara-miasa aminy dia niharan'ny fanentanana fanalàm-baraka sy fandrahonana saika tsy mitsahatra avy amin'ireo gazety mpanala azy an'ny mpomba ny governemanta:
Ireo gazety izay mitroka ny vokatry ny fanadihadian'ny KRIK dia tokony mandrotsaka vola ho azy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/02/94010/
 Fikambanana Open Society: https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations
 minisitry ny Vola Dušan Vujović: https://imovinapoliticara.krik.rs/display/profil.php?disp_id=18
 Minisitry ny harena voajanahary sy ny Angovo, Aleksandar Antic: https://imovinapoliticara.krik.rs/display/profil.php?disp_id=14
 Tranoben'ireo Manamboninahitry ny Tafika Mitam-piadiana ao Serbia : http://www.vudedinje.mod.gov.rs/